Dhaqaalaha Somaliland waxa hoos u dhac la taaban karo ku keenay xanuunka safmareenka karoona fayras. Dhaqaalaha Somaliland waa dhaqaale furan (open economy) waxay leedahay dakhli dhaqaale oo si weyn ugu tiirsan ganacsiga caalamiga ah gaar ahaan badeecadaha la soodhoofiyo (highly dependent on import trade). Dhaqaalaha Somaliland waxa udub dhexaad u ah oo haga shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ganacsiga (driven by the private sector). Dakhliga dowladu waxa uu xoog ugu tiirsan yahay dhaqdhaqaaqa suuqa ganacsiga (movements of market trade) iyo kastamyada, waana isha-dakhli ee ugu tunka weyn ilaha dhaqaale ee dowlada soogala. Sida uu sheegay Baanka Adduunku, dhaqaalaha Somaliland …
Burburka, dawlad la’aanta, faragelinta tooska ah iyo midda dadban, afkaaraha iyo shisheeyaha ku dhex hardamaya gudaha Soomaaliya, ayaa waxa ugu weyn ee shidaalka u ah, dhaqaajinayana uu yahay dhaqaalaha. Dhaqaalahu waa laf-dhabarta wax kasta oo maanta dunida ka dhacaya, gaar ahaan Soomaaliya. Ururrada argagixisadu muhiimad gaar ah baa ay siiyaan meelaynta dhaqaalaha, haddaan dhaqaale jirinna waxba uma socon karaan. Ururka Al-Shabaab muddo badan baa ay ku qaadatay jaangoynta, qaabeynta iyo meelaynta ilaha dhaqaalahu. Hadda oo uu marayo xaaladdii ugu wanaagsaneyn ee dhanka dhaqaalaha, waxa uu ku bixiyay dedaal fara badan sidii uu heerkan u soo gaadhi lahaa. Werwer badanna kama …
Trade deficit waa cabir dhaqaale oo caalami ah laguna muujiyo inta wadan waxa uu soo dhoofsado (import) ay ka badan yihiin waxa uu iska dhoofiyo (export). Trade deficit-ku wuxuu ka dhigan yahay in lacagta wadanka ka baxaysa ee suuqyada qalaad aadaysa ay ka badan tahay lacagta wadanka ka soo galaysa suuqyada dibada. Formula-da Trade deficit-ku waa: Trade deficit = Total value of imports – Total value of exports. Marka laba wadan oo ganacsi is-dhaafsada laga hadlayo, waxaa la dhahaa “Trade Deficit” baa ka dhexeeya marka labada wadan mid kamid ah uu kan kale ka soo dhoofsado wax ka badan inta …
Bariga dhexe ama si guudba ah waddamada Carbeed, iyo Geeska Afrika oo ay ku dhaqan tahay ummadda Soomaalidu ayaa ah kuwo qarniyo badan oo fac ka fac ku suntanaa dad diintoodu ama rumeysadkoodu uu yahay Islaam. Diintaasna aan beddelin, oo ka dhigtay sidii caadada iyo dhaqanka la iska dhaxlo. Se is beddelkii xoogganaa ee ka bilawday Galbeedka, oo ka soo bilaabmayey qarnigii 15-aad iyo 16-aad. Kaas oo ka dhashay diinta Masiixiga oo la jaanqaadi kari waydday daah’furradii kala duwanaa ee aqoonta casriga ah. Iyo wadaaddadii diinta Masiixiga oo la bah noqday xukuumadaha dhiig’miiratada ah ee ka jiray Galbeedka. Ka dib …
Nabadsugidda (Security) Soomaaliya waxa ka masuul ah sida hadda ay u dhisan tahay dawladdu waa wasaaradda amniga. Wasaaraddaas baa si buuxda uga wakiil ah dhammaan wixii khuseeya amniga dalka. Laakiin ilaa hadda ma cadda sababta loogu baahday wasarad amni (Ministry of Security). Dhammaan haykallada dawliga ah waxa amniga ka masuul ah wasaaradda arrimaha gudaha. Hay’adda NISA Hay’addani waxa ay si gaar ah uga masuul tahay nabadsugidda iyo sirdoonka dalka (Gude iyo Dibadba). Laakiin awood uma laha wasaaradda amnigu in ay maamusho hay’addan, oo waxa ay toos u hoos tagtaa madaxweynaha. Waa fahamxumada labaad ee ku jirta haykalka loo dhisayo amniga …
Hashu way caana badan tahaye weelasha aynu badsano! Marka aan ka tagno macna yarida dadka soomaalida ahi ay wax ku qaybsadaan iyo hoos isu eegashada in badan dadkeenu ku mashquulsan yahay, ee aan wax ku qaymayno waxa aduunka ka jira iyo sida aadanaha hormarka sameeyay uu u fakaro waxaa inoo soo baxaya wax aad uga duwan waxa aan nolosha iyo hormarka ka fahansannahay. Waxaan ogaanaynaa noloshan casriga ah wadamada siyaasad ahaan ayaa loo kala leeyahay ee dhaqaala ahaan iyo ganacsi ahaan nolosha casriga ah waa la wadaagaa, suuqyaduna waa kuwa dadka oo idil ka dhexeeya (Suuqa Dubai Tusaale kuugu filan), …